Gịnị mere Moses ahu?
Ma, gịnị mere Moses ahu tupu e lie? Akwụkwọ Nsọ kwuru ihe ọ bụla banyere ya?
Moses olili ozu na ọ dịghị nkịtị olili ozu. Ọ bụ Chineke n'onwe ya onye lìe ya na ọ dịghị onye maara ebe e liri ya.
Mozis bụ onye amụma, dị ka mgbe e kee maka ya. O nwetara ihe na-enweghị onye tupu ma ọ bụ mgbe ya enwetela Jehova wee gwa ya ihu na ihu "(5 mos. 34:10).
Moses, bú orù Jehova "nwụrụ n'ala nke Moab dị ka Jehova siri, o wee lie ya na ndagwurugwu dị nso Bet Pegor nke Moab, ma ọ dịghị onye maara kpọmkwem n'ebe ili ozu (5 Num. 34: 5-6).
Ọ bụ a narị afọ na iri abụọ mgbe ọ nwụrụ, ma n'agbanyeghị afọ ndụ ya, ọ bụ n'ụzọ zuru okè ike na ike. The Bible kwuru, sị:
"Ya nsogbu anya na bụghị isi na ọ na-efu ike ya" (5 mos. 34: 7).
Na a mgbe nile olili ozu ị na-etinye onye nwụrụ anwụ na a n'ili. Ma Moses Jehova lekọtara na, na ọ dịghị onye e kwere ka mara ebe ma ọ bụ otú o mere.
Ma, gịnị mere Moses ahu tupu e lie? Akwụkwọ Nsọ kwuru ihe ọ bụla banyere ya? Na Jude n'amaokwu nke 9, anyị na-agụ:
"... ọbụna Michael anwa anwa ebubo ekwensu ma ọ bụ ihe ọchị ya mgbe o busoro ya na ya banyere ihe ahu nke Moses. Ọ dị nnọọ kwuru, 'Jehova ga-elebara gị.' "
Agha n'etiti Michael na ekwensu banyere onye o ruuru ịbụ nwe Moses ahu. Devil kwuru na, n'ihi na ọ chọrọ ebe ahụ ozu ya n'ili. Ma Michael e nyere. Moses ahu ga-aga eluigwe.
Na Ndị Hibru. 2:14 bụ a okwu nke na-akpali a na onodu:
"Ebe ọ bụ na ụmụaka na-nketa nke anụ ahụ na ọbara, ya onwe-ya (Jesus) bụ n'otu aka ahụ, akụkụ nke otu, n'ihi na ọ site ọnwụ ya ga-eme ka ya na-esighị ike nke na-ọnwụ ike ya, ya bụ, ekwensu".
Na ọzọ translation kwuru ya otú a:
"... site ọnwụ onwe ọnwụ onyeisi."
Ọnwụ bụ karịsịa ekwensu gafere, na ebe. Ọ bụ ihe na-akpata na ọnwụ bịara n'ụwa na ọ chọrọ na-elekọta ahụ ha ma mee ka ha na ili. N'ihi ya ozu Mozis.
Na 1 Cor. 5 Paul na-ekwu okwu nke a dị oké njọ ụdị mmekọahụ rụrụ arụ. E nwere onye biri ndụ na ya na nwunye nna. The Apostle ike na-akatọ a ajọ omume ma na-ede amaokwu 3-5:
"N'ihi na m na, na bụ na-ejighị na ahu, ma gosi na mmụọ, nwere ugbua ka m nọ ugbu a, a na-ikpe nke ndị mere otú ahụ.
Na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst bụ anyị, gị na mmụọ m, na-ezukọta na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ike na-ekwurịta okwu na okwu Setan ka e bibie anụ, na mmụọ nsọ wee zọpụta n'ime Onyenwe anyị Jizọs. "
N'ebe a, anyị na-ahụ na Pọl na Kọrịnt ga-ahapụ onye a na Satan "ka mbibi nke anụ ahụ."
Paul bụ ya mere amụma hụrụ n'ọhụụ, ọ bụ ezie na ọ na-anọghị na-ahụ ihe na-aga na chọọchị na ọnyà ikpe nke ndị mere a iwe na iwe ya onye nnochi anya nne na ndị kasị dị egwu ụzọ.